Caadooyinka iyo dhaqammada Masaa'is - Mid ka mid ah tuulooyinka ugu caansan | Safarka Absolut
Masais waa dad ku nool Tanzania iyo Kenya. Iyagu waa mid ka mid ah qabiilooyinka ugu caansan adduunka, qayb ahaan sababtoo ah dharkooda ama qoob ka ciyaarkooda, laakiin iyagoon ilaawin in waxaas oo dhan ay ku jiraan caadooyinka iyo caadooyinka Masaarida oo aan maanta ka hadli doonno.
Hab nololeed aad u xiiso badan qayb kale oo adduunka ka mid ah, in kasta oo had iyo jeer ay iyagu gaar u yihiin. Waxyaabo badan ayay hayaan oo ay noo sheegaan oo magaaladan oo kale la soo galo waa had iyo jeer tacabur. Ma rabtaa inaad ogaato sirteeda gaarka ah?
1 Si ay u noqdaan nin weyn, waxay ahayd inay ugaarsadaan libaax
2 Kan ugu awooda badan, midka ugu xoolaha badan
3 Nidaamkooda siyaasadeed wuxuu ku saleysan yahay shirarka odayaasha
4 Nabiga dadka iyo shaqooyinkiisa
5 Cawsku waa muqaddas
6 Marnaba kama hadashid marxuumka
7 Haweenka, ragga iyo dahabkooda
8 Xaas badan
9 Dhiiga lo’du waa daawada ugu fiican
Si ay u noqdaan nin weyn, waxay ahayd inay ugaarsadaan libaax
Waxaa ka mid ah caadooyinka iyo caadooyinka Masais tan. Dhammaantood waxay ka yimaadeen xaqiiqda ah in magaaladu ka kooban tahay da '. Sidaa awgeed, waxaa jira kooxo dhowr ah oo dadka ka mid ah oo ka kooban qabiilkan oo u dhexeeya carruurnimada ama dagaalyahan yar ilaa dagaalyahan weyn ama yar yar iyo qof weyn. Laakiin tallaabada ugu weyn ee lagu noqon karo qaan-gaar buuxa ayaa ahayd ugaadh libaax. Waxay ahayd mid ka mid ah cibaadooyinka ugu caansan ee lagu muujiyo qiimaha ninka noqon lahaa dagaalyahan. Laakiin maadaama libaaxu yahay nooc la ilaaliyo, dhaqankan dib dambe looma raaco. Maalmahan, waxa la qabtay ayaa cakis ah waxayna noqdeen kuwo ilaaliya libaaxa.
Kan ugu awooda badan, midka ugu xoolaha badan
Haddii aad rabto inaad noqoto qof muhiim ah ama awood ku leh dhexda qabiilkan, markaa waa inaad heshaa madax badan oo lo 'ah. Sababtoo ah halkan laguma tirin karo xaalad ama lacag, macquul ahaan. Iyaga hantidooda ugu qaalisan waa xoolaha oo qofkii ugu wax badan ku leh maamulkooda ayaa ugu muhiimsan. Waxay la macno tahay xoolo iyo awood labadaba dadka kale ka hor.
Nidaamkooda siyaasadeed wuxuu ku saleysan yahay shirarka odayaasha
Meesha ugu caqliga badan waa waayeelka sidaa darteedna, cod ayey ku leeyihiin. Sidaa darteed, maadaama nidaamkoodu baahsan yahay, waxa la qabtay ayaa ah in lala kulmo dhammaan xubnaha kale ee qabiilka oo laga wada hadlo arrimaha qaarkood. Wadahadalladan ama shirarkani waa kuwo guud ahaan guud ahaan bulshada ku dhex jira.
Nabiga dadka iyo shaqooyinkiisa
Caadooyinka iyo caadooyinka Masais dhexdeeda waxaan ka helaynaa tan. Magaalada gudaheeda waxaa jooga qof loogu yeero nebi ama 'Laibon'. Waa maxay ujeedkeedu? Waa hagaag, u noqoshada dhexdhexaadiye u dhexeeya qabiilka laftiisa iyo Ilaaha Ngai. Shaqo sidan oo kale ku heli meysid nasiib, laakiin waa mid la iska dhaxlo, sidaa darteed jiilba jiil ayuu u sii gudbinayaa oo wuxuu ku kooban yahay dad kooban. Waxay u egtahay nooc garsoore ah oo isla markaa sidoo kale leh aragti mustaqbal. Waxaas oo dhan waxaa u dheer, inuu sidoo kale isagu yahay qofka maamulo xafladaha sidoo kale dagaalka u siiya horay-u-socodka ama mas'uul ka ah u yeerista biyaha si roob looga dhigo.
Cawsku waa muqaddas
Masaa'isha waa cunsur muqadas ah, maxaa yeelay waa waxa ay xooluhu quutaan. Marka dhaqankooda waxaa la dhihi jiray qofku markuu wax garaacayo ama canaananayo cunug, wuxuu rujin karaa cawska qaarkood mana ciqaabi karo. Magac ahaan, buriyay ciqaabta.
Marnaba kama hadashid marxuumka
In kasta oo aan aaminsanahay in dadku dhintaan oo keliya markay joojiyaan ka hadlkooda ama markay iloobaan, dadkaasi kama qaadaan inay ka hadlaan waxa ku saabsan dhaqankooda. Marka qofku markuu dhinto, si toos ah ugama hadli doonaan wax isaga ku saabsan, maxaa yeelay haddii ay tahay inay wax tilmaamaan, markaa waxay ugu magacaabaan naaneysta. Intaa waxaa dheer, waxay tixgelinayaan taas in yar oo xul ah ayaa mudan nolosha weligeed ah, Waxay meydadka uga tagi doonaan hawada banaan ee qashin-qubka ay cunaan. Dadka ugu muhiimsan qabiilka waa la aasi doonaa, laakiin marwalba waxaa lagu aasi doonaa qoto dheer. Iyaga agtooda waxay dhigi doonaan xoogaa caws ah, iyo sidoo kale kabo kabo iyo bakoorad.
Haweenka, ragga iyo dahabkooda
Xaqiiqdii waad aragtay taas, ka sokow khamiisyadooda cas, haweenku sidoo kale waxay xirtaan silsilado ama jijimooyin kala duwan iyo qalab kale oo aad u midabo badan. Iyaga ayaa lagu sameeyaa luul leh midabo kala duwan. Iyaga, waxaa sidoo kale jiri doona hilqado iyo qalabyo. Waxaa intaa dheer, godadka (kala-baxyada) waxay u muuqdaan kuwo aad u ballaaran, waana sababta ay ugu badan tahay inay sudhan yihiin waxyaabo aad u muuqda, oo aan ka dhex muuqanno qaar ka mid ah foolka xoolaha.
Waa run in fikradda guur ka badan ay ku faafto qabaa’ilka intooda badan. Inta badan ee ay xaasas leeyihiin, ayaa awooddooda ka weyn. Sababtaas awgood, oo ku saleysan fikraddan, guurka waxaa loo sameeyaa maaddaama haweeneydu aad u yar tahay. Laakiin sidoo kale waa in la sheegaa in tani aysan ka hortageynin taas kahor guur la diyaariyey, waxaa laga yaabaa inuu xiriir xoogaa la leeyahay dhalinyarada kale ee da'dooda ah.
Dhiiga lo’du waa daawada ugu fiican
Waxaan ognahay in lo'da ay yihiin hab nololeedka qabiilkan. Horaan u soo sheegnay in cawsku muqaddas yahay, maxaa yeelay waxay siisay cunto lo'da, oo waliba xurmo leh. Laakiin mararka qaarkood haddii ay ka takhalusaan xayawaan waxay noqon doontaa in la cuno iyo wax aad u badan, in ay ka faa'iidaystaan ​​gabi ahaanba wax walba. Geesaha ilaa hoolalka kuwani waxay u adeegi karaan qurxin. Laakiin haddii ay jiraan wax muhiim ah waa dhiig, maxaa yeelay waxay u haystaan ​​inay yihiin dib u soo celin dhab ah. Taasi waa sababta badanaa loo siiyo dadka jiran ama wiilasha markay uun gudeen. Sidoo kale waa wax iska caadi ah inay sameeyaan nooc caano fadhi ah caanaha iyo dhiiga xoolaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Caadooyinka iyo caadooyinka Masaarida